२०७४ असार १७ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
राजपाको मागमा सरकार गम्भीर भएन –अध्यक्ष ठाकुर
प्रस, पथलैया, १६ असार/ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आप्mनो पार्टीले हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । सर्लाही जानेक्रममा शुक्रवार सिमरा विमानस्थल आइपुगेका अध्यक्ष ठाकुरले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सहमतिका लागि राजपाले लचकता अपनाए पनि सरकारले त्यसलाई लत्याउँदै हिंडेको आरोप लगाए । सहमतिकै लागि लचक हुँदाहुँदै सरकारले राजपालाई भित्तामा पु¥याएको उनको भनाइ थियो । “अब हामीले योभन्दा कति लचकता अपनाउनु, सरकारले लचकताको फाइदा उठाउँदै हामीलाई भित्तामा पु¥याइसक्यो,” ठाकुरले भने,“हाम्रो मागका विषयमा अब पनि गम्भीर नभए सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । राजपासँग भएको सम्झौतालाई सरकारले कार्यान्यवन गरेको भए स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।” दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने विषयमा राजपासँग कुनै सहमति नभएको भन्दै ठाकुरले आपूmहरूको माग पूरा नगरिए निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिए । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको सङ्ख्य
राजपालाई सहभागी गराएर असोजमा चुनाव –मन्त्री साह
प्रस, पथलैया, १६ असार/ शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले असन्तुष्ट राजपालाई सहभागी गराएर असोज २ मा दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन गरिने बताएका छन् । गृह जिल्ला रौतहट जानेक्रममा प्रेस सेन्टर नेपाल बाराले सिमरा विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साहले असोज २ गतेभन्दा अगाडि निर्वाचनको मिति सार्न सम्भव नभएको बताए। उनले दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएपछिको समयमा असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याएर दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन गरिने बताए । “दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अघि सार्न अब सम्भव छैन, अब असन्तुष्ट दल राजपालाई सहमतिमा ल्याएर असोज २ मा निर्वाचन हुनेछ ।” राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगै एकै विमानमा सिमरा आएका मन्त्री साहले भने,“समय पर्याप्त छ, राजपासँग सहमति गर्न सकिन्छ । चुनाव अघि सार्नेभन्दा पनि राजनीतिक निकास खोज्नेतर्पm सरकारले पहल गर्नेछ ।” मन्त्री साहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), द्रुतमार्गसँगै निजगढ नगरपालिकाको टाँगियाबस्तीमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई पनि अब अघि बढाइने बताए । टाँगियाबस्तीको बस्ती र जङ्गलको काठ व्यवस्थापनका विषयमा छलफल
भिखमपुर माविका प्रअले भर्ना शुल्कको नाउँमा रकम माग्दा अभिभावकद्वारा दुव्र्यवहार
प्रस, वीरगंज, १६ असार/ धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. २ भिखमपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले भर्नाका नाममा विद्यार्थीहरूसँग शुल्क असुलेको अभिभावकहरूले आरोप लगाएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसँग विद्यालयले जनही तीन सय रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा कक्षा १ देखि ९ सम्ममा भर्ना भएका ३५८ जना विद्यार्थीसँग जनही तीन सय रुपैयाँ लिएर विद्यालयले भर्ना गरेको अभिभावकहरूले बताएका छन् । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गर्दै कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल्न रोक लगाएको छ। विद्यालयले नियमविपरीत भर्ना शुल्क विद्यार्थीहरूसँग असुलेको अभिभावकहरूको भनाइ छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अरमुल्लाह आलमले भने भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसँग भर्ना शुल्क नलिई विद्यालयमा डेस्कबेन्च बनाउनका लागि अभिभावकहरूकै सहमतिमा चन्दास्वरूप जनही तीन सय रुपैयाँ विद्यालयले सहयोग लिएको बताए । नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा ६ देखि ९ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसँग मात्र चन्दास्वरूप सहयोग लिइएको प्रअको भनाइ छ । विद्यालयले नियमविपरीत भर्ना शुल
गर्मी बिदाको विषयमा कन्या माविमा विवाद
प्रस, वीरगंज, १६ असार/ वीरगज महानगरपालिकाको बिर्तास्थित सुन्दरमल रामकुमार कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयमा गर्मी बिदाको विषयलाई लिएर शिक्षकहरूबीच विवाद भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कुँवरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले जारी गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरविपरीत गर्मी बिदाको लागि विद्यालय बन्द गर्न सूचना सार्वजनिक गरेपछि शिक्षकहरूबीच विवाद भएको हो । जिशिका पर्साले जारी शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार साउन ५ गतेदेखि गर्मी बिदाको लागि पर्साका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन जारी गरे पनि प्रअ कुँवरले असार १८ गतेदेखि नै विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि शिक्षकहरूबीच विवाद भएको हो । विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरू बिदाको विषयलाई लिएर दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । केही शिक्षक शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै गर्मी बिदा दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही शिक्षक प्रअले जारी गरेको सूचना अनुसार नै गर्मी बिदा हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कँुवरले भने शिक्षकहरूको बैठकले नै असार १८ गतेदेखि गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको बताए । कक्षा ११ को शैक्षिक सत्
तेस्रो सांसद कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता, आयोजक कलैया क्रिकेट क्लब विजयी
प्रस, वीरगंज, १६ असार/ कलैयाको सिद्धेश्वर खेल मैदानमा जारी तेस्रो सांसद कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो दिनको खेलमा आयोजक कलैया क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ । मकवानपुरलाई ३२ रनअन्तरले पराजित गर्दै कलैया क्रिकेट क्लब लिग खेलको तेस्रो दिन विजयी भएको हो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको कलैयाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ११२ रन बनाएको थियो । कलैयाका हासिम अन्सारीले २७, सुभाष यादवले २१, त्रित दासले १६ रन बनाएका थिए । मकवानपुरका सबी लामाले ४, शङ्कर गजुरेलले ३ र राजु यादव तथा शङ्कर कुमारले १/१ विकेट लिएका थिए । कलैयाविरुद्ध ११३ रनको विजयी लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेका मकवानपुर १६ ओभर २ बलमा सबै विकेट गुमाएर ८० रनमैं सीमित रह्यो । मकवानपुरका सुमन सोनारले २४ र रमेश उपाध्यायले १२ रन बनाए । कलैयाका आशुतोष पटेलले ३ विकेट, रवि र हासिम अन्सारीले २/२ र सुदीप चौधरी र निखिल सिंहले १/१ विकेट लिएका थिए । आजको खेलको म्यान अफ द म्याच कलैयाका हासिम अन्सारी घोषित भए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि वीरगंज क्रिकेट क्लब र कलैया क्रिकेट क्लबबीच हुने कलैया क्रिकेट सङ्घका कोषाध्यक्ष्F सु
उमाशङ्कर द्विवेदी त्यसैले पुरुषोत्तम १ यी कुराहरू छाडी, शत्रुको विचार जानेर तपाईंलाई जस्तो उचित लाग्दछ त्यस्तै गर्नुहोस् । श्रीकृष्ण, हामी देखिरहेका छौं कि वनवास र अज्ञातवासको समय हाम्रो विचार अर्कै थियो तथा अहिले हाम्रो विचार अर्कै भएको छ । वनमा रहेको बेला राज्य पाउन यति अनुराग थिएन, जस्तो अहिले छ । तपाईं कौरवसभामा गएर पहिले सन्धिकै कुरा गर्नुहोला, अनि पछि युद्धको धम्की दिनुहोला र यस प्रकारको कुरा गर्नुहोला जसले मन्दबुद्धि दुर्योधनलाई व्यथा नहोस् । तपाईंले नै विचार गरेर हेर्नुहोस्– कुन यस्तो पुरुष होला जो सङ्ग्रामभूमिमा महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, तपाईं, बलरामजी, सात्यकि, विराट्, उत्तर, दु्रपद, धृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदिराज, धृष्टकेतु र मेरो सामुन्ने अड्न सक्छ । तपाईंले भनेपछि विदुर, भीष्म, द्रोण र बाल्हिक आदिले कुरा बुझ्नेछन् कि कौरवहरूको हित केमा छ । अनि उनीहरूले राजा धृतराष्ट्र र सल्लाहकारहरूसहित पापी दुर्योधनलाई राम्ररी सम्झाउनेछन् । यसपछि सहदेवले भने– “महाराजले भनेको कुरा सनातन धर्म नै हो तर तपाईंले यस्तो प्रयत्न गर्नुहोला, जसले युद्ध नै होओस् । यदि कौरवहर
राजदेवी र करबोल अन्तर्सम्बन्ध
सञ्जय मित्र राजदेवी मन्दिरलाई राजा वा राजपरिवारसँग सम्बन्धित मानिन्छ । सामन्तहरूले पनि आपूmलाई राजासरह देखाउन राजदेवी मन्दिरको निर्माण गरेको देखिन्छ । राजदेवीको अर्को विशेषता यो पनि रहेको छ कि यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ । करबोल भन्नासाथ मुस्लिम समुदायसित सम्बन्धित खुला चौर हो । त्यहाँ मुस्लिम समुदायको एउटा पर्व मनाइन्छ उत्सवको रूपमा । पहिलेभन्दा मुस्लिम समुदायमा दाहाको महŒव कम हुँदै गएको देखिएको छ । यस अर्थमा कि यससँग सम्बन्धित लाठी, झारा, झिरी, बहुरूपियालगायतका संस्कृति लगभग हराइसकेका छन् । यसले गर्दा करबोलको महŒव केही कम भएको र करबोलको खुल्ला चौरमा अतिक्रमण भएको छ । रौतहटको ईशनाथ गाउँपालिकामा राजदेवी मन्दिर करबोलमा रहेको छ । वि.सं. १११४ मा औरैयामा स्थापित भगवान् ईशनाथ महादेवको मन्दिरभन्दा उत्तरपट्टि केही पर रहेको करबोलमा रहेको राजदेवी मन्दिर हिन्दू र मुस्लिम समुदायको सहिष्णुताको परिचायक हो । हिन्दू र मुस्लिम समुदाय दुवैको पर्याप्त उपस्थिति रहेको ईशनाथ गाउँपालिकाको करबोल पहिले बन्यो कि राजदेवी मन्दिरको स्थापना पहिले भयो ? स्थानीय मौन छन् उत्तरमा । मुखामुख गर्नुबाहेक
– समीर पाख्रिन समय ः दिउँसो । स्थान ः डाँडाघरे दिदीको घरको पिंढी । दृश्य ः भाइ मनबहादुर र उसकी पत्नी कुमारी डाँडाघरे दिदीसित भान्जा दीपकको बिहे बारे सल्लाह गर्दैछन्। मनबहादुर ः यसपल्टको दशैंमा त भान्जाबाबू आउने पक्का छ । यही मौकामा केटी खोजेर भान्जाको बिहे गरिदिइहाल्ने होइन त दिदी ? कुमारी ः हो दिदी, हजुरलाई यति ठूलो घर एक्लै सम्हाल्न गा¥हो भएको छ । मखमलीले पनि कति दिन सघाउँछे ? उसको पनि बिहे गरेर अर्काको घर जाने उमेर भइसक्यो । मनबहादुर ः अँ दिदी, अब अबेर गर्नुहुँदैन । तिमीलाई एउटी बुहारी त नभई भॉछैन । दिदी ः हो मने, तर यो घर रेखदेख गर्न सक्ने बुहारी पो पाइएला कि नपाइएला । मनबहादुर ः तिमी चिन्तै नगर न । भान्जालाई बुहारी म खोजी हाल्छु नि । कुमारी ः हो दिदी, मखमलीको बुबा यताउता हिंडिरहनुहुन्छ । खोजी हाल्नुहुन्छ नि । भान्जालाई एउटा दुलही पनि खोज्न नसक्ने के मामा । (लोग्ने मनेतिर पुलुक्क हेर्छे ।) दिदी ः खोज्न त भाइ, दीपक आउँदैछ । यही मौकामा बिहे गरिदिई हालौं । मनबहादुर ः खोज्न त खोजौंला दिदी तर भाइमाथि पनि यसो दया माया राख्नुपर्छ नि । दिदी ः जिब्
माओवादी र मधेसवादीको हाडको पीडा उस्तै छ
वैद्यनाथ ठाकुर स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सकिएको छ । प्रदेश नं. २ बाहेक सम्पूर्ण प्रदेशको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै सम्पन्न भएको छ । दुवै चरणको निर्वाचनमा मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले चुनावमा भाग लिएको छैन । आप्mनो मूल माग संविधान संशोधन सम्बोधन नभएकोले चुनावमा नगएको उनीहरूले बताइरहे पनि चुनावमा भाग लिनेहरूको लागि पनि समाचार त्यति सुखद रहेको छैन । समग्र पहाडमा अन्धराष्ट्रवादको नारा उचालेर नेकपा एमालेले मधेसलाई जसरी भारतपरस्त देखाउन खोज्यो, त्यस अर्थमा आंशिकरूपमैं भएपनि पहाडमा एमाले सफल भएको देखिन्छ । पहाडका जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले)ले कर्णाली नदी बेचेको, टनकपुरमा झुकेको विषयलाई नजरअन्दाज गरेकोजस्तै देखिन्छ । राणाशासनको समाप्तिपश्चात् काठमाडौंको सत्तामा हालसम्म बाहिरीरूपमा जसले जे जे भने पनि वास्तवमा दिल्ली दरबारको हनुमान नै बस्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तर पनि दक्षिणका हनुमानहरूबीच बेलाबेलामा को हनुमान, को ढेढु ? भन्ने मीठो विवाद चलिरहन्छ । एकले अर्कोलाई तँ हनुमान नै होस् भन्ने प्रमाणित गर्न अ
लत छुटाउन गा¥हो हुन्छ
लत चाँडै छुट्दैन । कुनै पनि कुराको लत हतपती छुट्दैन । चाहे त्यो दैनिक गरिने खानपिनको दाल, भात र तरकारी नै किन नहोस् । कसैले दैनिक दाल, भात, तरकारी खाने गरेको छ भने उसलाई त्यो नभईकन हुँदै हुँदैन । दिनभरिमा दाल, भात, तरकारी एकपटक नखाँदा के नखाएको, के नखाएको जस्तो हुन्छ । जबकि जुनसुकै भोजनले पनि पेटको भोक मेटाउने काम गर्छ । त्यस्तै, कसैले दैनिक बिहानै चिया पिउने लत बनाएको छ भने उसलाई तोकिएको समयमा चिया नपाउँदा के बिराएको, के हराएको जस्तो हुन्छ । सामान्यतया धेरै व्यक्तिलाई सुर्ती, चुरोट आदिको लत बसेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू त सुर्ती, चुरोट सेवन नगरी शौच पनि जान सक्दैनन् । केही मानिस बिहान उठनासाथ रेडियो, टिभी, पत्रिका, अनलाइनमा समाचार हेर्न खोज्छन्, यो पनि एक प्रकारको लत नै हो । आजभोलि मानिसहरूमा मोबाइल चलाउने लत बसेको छ । यी लतहरूले मानिसलाई दीर्घकालमा मात्र असर पार्न सक्छ तर नशाजन्य मादकपदार्थ र लागूऔषधले भने मानिसमा तुरुन्त असर पार्छ । यस्तो लतमा परेकाहरूलाई लत हटाउनै गा¥हो हुन्छ । खासगरी लागूऔषधको लतमा हाम्रो समाजका युवाहरू परेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट सिको गर्दै
२०७४ असार १६ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
एमालेको नीति मन पराएर जनताले भोट दिएको हो –नेता नेपाल
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोस्रो चरणको चुनावमा राजपा सहभागी नभएपछि पछुताइरहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला कार्यसमिति, पर्साले आयोजना गरेको इद मिलन समारोहमा बोल्दा नेता नेपालले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अब पछुताएर केही नहुने, धैर्यधारण गरी ५ वर्ष कुर्न आग्रह गरे । एमालेको विचारको कारण देशभरिमा एमालेको पक्षमा परिणाम आइरहेको दाबी गर्दै नेता नेपालले विगतको चुनावमा ४६ प्रतिशत र अहिले चुनावमा १० प्रतिशत गरी ५६ प्रतिशत सिट सङ्ख्या हुने दाबी गरे । विभिन्न पार्टीप्रति कटाक्ष गर्दै नेता नेपालले जनताको सम्पत्ति लुटने माओवादी तथा देश बेच्ने, लुटने काङ्ग्रेसको हविगत तपाईंहरूको सामु छ भनी बताए । उनले चुनाव परिणामले एमालेलाई जनताले अत्यधिक विश्वास गरेको बताए । एमाले सर्वहारा वर्गको पार्टी रहेको र जनता र देशको पक्षमा निर्णय गर्दै आएको कारण जनताले स्वीकार गरी मत दिएको बताए । नेकाका अधिकांश नेता भ्रष्टाचारी रहेको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले प्रदेशको चुन
धानको बीउ ब्याडमैं सुक्न थाल्यो
प्रस, ठोरी, १५ असार/ असार १५ गते मङ्गलवारका दिन देशका विभिन्न भागमा दही–चिउरा खाँदै खेतमा धान रोपाइँ भइरहँदा पर्साको सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगका किसानहरूको भने धानको बीउ ब्याडमैं सुक्न थालेको छ भने कतै अहिलेसम्म व्याड नै राख्न पाएका छैनन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने समयमा यस क्षेत्रका किसानहरू भने टन्टलापुर घाम छल्न चौतारामा दिन बिताउन बाध्य छन् । आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू समयमा पानी पर्न नसकेपछि धानखेती गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । असार महिनाको मध्यभागमा आइपुग्दा पनि पानी पर्न नसकेपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । सिंचाइ सुविधा नभएको निर्मलबस्ती, सुवर्णपुर तथा ठोरीका कृषकहरूले राखेको धानको बीउ ब्याडमैं सुक्न थालेको छ । निर्मलबस्ती, सुवर्णपुर लगायत केही स्थानमा बोरिड्ढो व्यवस्था गरी विगतमा धान रोपाई हुँदै आएको भए पनि यस वर्षदेखि बोरिङबाट पनि पानी आउन छाडेको स्थानीय अमर निर्दोषले बताए । साबिक निर्मलबस्ती गाविसको निर्मलबस्ती, नयाँबस्ती, विजयबस्ती र मालीबस्ती गरी झन्डै ६ सय बिघा जग्गमा धान खेती हुँदै आएको छ । एकातर्फ धानको बीउ हुर्किसकेको र अर्काे
ठूलो उद्योगको ठूलो नै चुनौती
ई. गोपाल श्रेष्ठ वार्षिक ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको उद्योगलाई ठूलो उद्योग भनिन्छ । चार/पाँच अर्बको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग नेपालमा धेरै नै भइसकेको छ । वार्षिक चार अर्ब कारोबार भएको उद्योगले भ्याट/राजस्व बापत मात्र ५२ करोड सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने अझ अन्तःशुल्क, भंसार महसुल आदि सबैको हिसाब गर्दा एक अर्ब नै राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्दा पनि अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन । यस्ता उद्योगहरूसँग सरकार, समाज/ समुदायका विभिन्न पक्षले विभिन्न आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् । सरकारले रोजगारको समस्याको हल र राजस्वको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ भने समाज/समुदायले रोजगार र स्थानीय विकासमा सहयोगको आकाङ्क्षा रोखेको हुन्छ । उद्योगहरूमा सयौं मजदुर तथा कर्मचारी काम गर्छन् । यी मजदुर तथा कर्मचारीको आकाङ्क्षा पनि आकर्षक र दिगो आम्दानी नै हुन जान्छ । ठूला उद्योगहरूमा मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो नै हुने भएकोले मजदुर सङ्गठन/ट्रेड युनियन पनि एकभन्दा बढी, कहिलेकाही त तीन/चारवटासम्म हुन्छन् । ट्रेड युनियनहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो होइन । तर जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुँदाहुँदै अस्वस्थ भइदिन्छ, त्यति बेला उद
निराशाजनक औद्योगिक विकास
शीतल महतो विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घटदो क्रममा छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत हराहारीमा पुगेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरू कृषि र औद्योगिक क्षेत्र दुवैको योगदान लगातार घटदै जानु नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । सबल र सुदृढ अर्थव्यवस्थाका लागि मूलभूत आधारहरूको योगदान बढाउन सकिएमा मात्र मुलुक सम्पन्नताको बाटोमा लम्किन सक्छ । अहिले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका आर्थिक क्रियाकलापमा राज्य तटस्थ बस्ने वा उदासीन देखिने मनोवृत्तिले मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण भएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याको सोझो सम्बन्ध त्यहाँको आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएको हुन्छ । किनभने आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता वा समस्याका कारण नै सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेदको सृजना हुन्छ । यिनै विभेदहरू गहिरिएर बढदै जाँदा समाजमा द्वन्द्व
के विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बचत र ज्ञानको उपयोग भएको छ ?
विश्वराज अधिकारी परदेशमा व्यक्ति जहाँ हुन्छ, उसको साथमा उसको देश पनि हुन्छ । कुनै व्यक्ति भूगोलद्वारा निर्धारित गरिएको आप्mनो देशभित्र नभए तापनि, कारणवश अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पुगे तापनि, उक्त व्यक्तिसँग उसको देश पनि सँगै रहेको हुन्छ । विदेशमा बसोबास गरे तापनि, उसले निरन्तर आप्mनो जन्मस्थल, आप्mनो देशलाई अटुट माया गरिरहेको हुन्छ । र विदेशमा बस्नेलाई आप्mनो देशको माया झनै बढी लाग्ने गर्दछ किनभने स्वदेशमा बस्न नपाएको पीडा उसले स्वयंले प्रत्येक पल अनुभव गरिरहेको हुन्छ । विदेशमा बस्ने कुनै व्यक्तिलाई स्वदेशको माया लाग्दैन भने त्यो अपवाद हो । विश्लेषणको पृथक विषय हो । यसरी आप्mनो मुलुक छाडेर विभिन्न कारणले विदेशमा बसेका व्यक्तिहरूको समूहलाई डायस्पोरा भन्ने चलन छ । हामी यस आलेखमा नेपाली डायस्पोराको चर्चा गर्नेछौं । नेपाली डायस्पोराले नेपालको आर्थिक विकासमा पु¥याउन सक्ने योगदानबारे चर्चा गर्नेछौं । नेपाली डायस्पोरा निकै विस्तारित हुँदैछ । ज्ञान र साधन एवं स्रोतको हिसाबले पनि अन्य मुलुकको भन्दा नेपाली डायस्पोरा धेरै अगाडि छ । अहिले नेपालीहरू संरा अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, फ्रान
राष्ट्रहित विपरीत कार्य
श्रीमन्नारायण सरकारले १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण काम बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई दिएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय महŒवको यति ठूलो काम कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत परवाह नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाइँदा त्यसमा आर्थिक चलखेल समेत भएको हुन सक्ने आक्षेपहरू पनि लगाइँदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उपरोक्त आयोजना नेपालीले नै बनाउनुपर्ने र त्यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा लैजानुपर्ने विचार व्यक्त गरेकोमा निजी कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा सुम्पिनु गलत कार्य भएको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई समेत ध्यान नदिई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको चर्चा सर्वत्र छ । विवादित चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन शुरुमा नेकपा एमालेले आवश्यक पहल र तयारी गरेको थियो भने मौन समर्थन यसमा सबै ठूला दलहरूको रहेको देखियो । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी, जग्गाको मुआब्जा बितरणको लागि आर्थिक स्रोत जोह
तेस्रो चरणको उपयोग गरौं
पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को चुनाव सम्पन्न गरेको सरकारले राजपाको विरोधका बावजुद दोस्रो चरणको चुनाव पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अब सरकारको सामु प्रदेश नं. २ को चुनाव असोज २ गते गर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर राजपाको विरोधको कारण सरकारले उसको पनि सहभागिता गराउन पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा मात्र चुनाव गरायो । पहिलो मधेस आन्दोलन–०६४ देखि मधेसमा शक्तिशाली पार्टी बनेको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल हालको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी भयो । मधेसवादी पार्टीमा शक्तिशाली मानिएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएपछि राजपा नेपालको शक्ति क्षीण भएको थियो । हुनत सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुप¥यो । माओवादीबाट छुट्टिएको नयाँ शक्ति पार्टीसँगको सहकार्यमा पहिलो चुनाव लडेको फोरम नेपालले सफलता नपाएपछि राजपा नेपालले चुनावमा गएकोमा उसको खिल्ली उडाउन बाँकी राखेन । हुनत फोरम नेपालले बुलेटको जवाफ ब्यालेट हो भनी चुनावमा सहभागिता जनाएपछि उसको राजनीतिक दूरद
२०७४ असार १५ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
अर्थ न बर्थको राजपाको बन्द सफल
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको राजपा नेपालले गरेको बन्दको असर वीरगंजमा पनि परेको छ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा आज सम्पन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन नभएको प्रदेश नं. २ मा समेत गरिएको बन्दको असर वीरगंजमा पनि परेको हो । बिहानैदेखि राजपाका कार्यकर्ताले चोकचोकमा टायर बालेर बन्द सफल पार्न आह्वान गरेका थिए । उनीहरूले मोटरसाइकल ¥याली निकालेर बन्दको आह्वान गरेपछि चार चक्केबाहेक ईरिक्शा, रिक्शा, टाँगा, साइकल, मोटरसाइकल सञ्चालनमा रह्यो । त्यतिखेरसम्म मेनरोडका पसल, बजारहरू बन्द रहे । त्यसपछि सबै सुचारु भएको थियो । निर्वाचन नभएको प्रदेशमा गरिएको बन्दको सबैबाट आलोचना भएपछि दिउँसोदेखि आन्दोलनकारीले बन्दमा ढिलाइ गरेका थिए ।
कुर्मी एमाले परित्याग गरी फोरममा प्रवेश
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ एमालेनिकट लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठन, पर्साका अध्यक्ष सुन्दर कुर्मीले पार्टी परित्याग गरेका छन् । बुधवार वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरी कुर्मीले ३० वर्षको कम्युनिस्ट यात्रा परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेशको घोषणा गरेका थिए । उनले स्थानीय निर्वाचनमा आपूm मेयर पदको दावेदार भएको र आप्mनो नामसमेत जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएकोमा पछिल्लो समयमा नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक महम्मद बसरुद्दीन अन्सारीलाई आर्थिक लेनदेनमा एमाले प्रवेश गराएर पार्टीले मेयरको उम्मेदवार घोषणा गरेकोले आपूmले पार्टी परित्याग गरेको प्रस्ट्याए । एमाले, पर्साले कुर्मीलाई भर्खरै जिल्ला कमिटी सदस्य मनोनीत गरेको थियो । बसरुद्दीन अन्सारीको मेयरमा टिकट निश्चित भएपछि कुर्मीलाई जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । पार्टी परित्याग घोषणा कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष सांसद लालबाबू राउत गद्दी, जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादव, प्रह्लाद गिरीलगायतको सहभागिता थियो । यसैगरी पर्सागढी गाउँपालिका अन्तर्गत हरपुर वडामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पार्टी प्रवेश का
गर्मीयाममा हुने रोगहरूले सेढवावासी पीडित
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ सुवर्णपुर गाउँपालिका अन्तर्गतको सेढवालगायतका गाउँमा अहिले गर्मीयाममा हुने रोगहरूको प्रकोप बढेको छ । घाउ, खटिरा, छालासम्बन्धी रोग र कान पाक्ने समस्याले स्थानीयवासी पीडित भएका छन् । खासगरी विद्यालयका साना बालबालिकाहरूमा घाउ, खटिरा आउने, छालासम्बन्धी रोग र कान पाक्ने समस्या देखापरेको सेढवाका शिक्षक धर्मेन्द्र पासवानले बताए । घरैपिच्छे यो समस्या अहिले विद्यमान रहेको र निधार, टाउको, कान, आँखाको छेउछाउ र घाँटीमा घाउ निस्किएर तीन दिनसम्म सताउने गरेको बताइएको छ । बालबालिकाहरूमा देखिएको यो रोग आपैंm तीन दिनपछि निको हुने भएपनि सङ्क्रमणको रूपमा टोलभरिका बालबालिकाहरूमा देख्न पाइन्छ । रोगको कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जाने क्रम घटेको छ । गाउँका ७५५ भन्दा बढीलाई यो रोगले सताएको उपस्वास्थ्य चौकी शङ्करसरैयाका प्रमुख कपिलदेव गौरोले बताए । फोहर पानी र सरसफाइमा हुने कमी कमजोरीका कारण यो रोगको सङ्क्रमण बालबालिकाहरूमा बढी देखिएको उनले बताए ।
धान दिवस ः दही चिउरा र दहीचिउरे
सञ्जय साह मित्र नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ कृषि विकास मन्त्रालय पनि रहेको छ । यहाँका अझै पनि अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित छन् । धेरै उद्योग र व्यवसाय पनि कृषिमैं आधारित छ । कृषि र यससँग सम्बन्धित उद्योग र व्यवसायको देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान रहेको छ । अहिले पनि नेपाली समुदायमा कृषि व्यवसायलाई सर्वोत्तम व्यवसायको रूपमा मानिन्छ । तर कृषि व्यवसायले भने अझै सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । कृषिमा तिनीहरू लाग्दछन् जो अन्यत्र कुनै काममा सफलता प्राप्त गर्दैनन् भन्ने विश्वास छ । ग्रामीण समुदायमा पनि कृषिप्रतिको यो उपेक्षाभाव पाइन्छ । कुनै न कुनै रूपमा यस प्रकारको अप्रत्यक्ष उपेक्षाले माथि–माथिसम्म स्थान प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसै कारणले कृषि क्षेत्र आकर्षक हुन सकेको छैन । कृषिलाई अझ आकर्षित कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिवसहरू मनाउन जरुरी छ । आज धान दिवस हो । राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा असार १५ लाई मानिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भात मन पराइन्छ । करिब सबै नेपाली भात मन पराउँछन् । कृषिमा पनि सबैभन्दा बढी खेती धानकै गरिन्छ । धानको खेती सबैभन्दा बढी हुने र नेपालीहरूले मन पराउने भात ह
धान सर्वोत्तम अन्न
नेपालमा असार १५ लाई धान दिवस भनिन्छ । योे दिनमा धानको रोपाइँ गरिन्छ । धान रोपेको खुशीयालीमा दहीचिउरा खाइन्छ । खासमा धान रोप्नु र दहीचिउरा खानु नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो । किनभने असार भनेको गर्मीको महिना हो । गर्मीमा सुपाच्य र सकभर शाकाहारी भोजन आयुर्वेदको आग्रह हो । नेपालमा धानले विशिष्टता पाएकोमा अचेल कृषिविज्ञहरूलाई रिस उठछ । धान मात्र किन, अन्य अन्नको उपभोग गर्ने हो भने धानमाथिको परनिर्भरता कम हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा अघि सारिन्छ । कुरा सही हो, नेपालीहरूले दुवै छाक भात नखाएर, एक छाक भात र अर्को छाक अन्य अन्न खाने हो वा कहिले–काहीं मात्र भात खाएर अरू अन्नको पनि उपभोग गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा चामल आयात गर्नुपर्ने थिएन । तर कुरा यतिमैं समाप्त हुँदैन । नेपालीहरूका लागि धान अन्न मात्र होइन, यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महŒव पनि छ । चामल अक्ष्Fता बनेर देवीदेउताको पूजा र धार्मिक कार्यमा प्रयुक्त हुन्छ, दशैंमा टीका बनेर मानिसको निधारमा टाँसिन्छ । देवी देउतालाई तिल, जौ आदि पनि चढाइन्छ तर हिन्दू धार्मिक कृत्यमा भूमि पूजा पछि धान्य पूजा गरिन्छ, सप्तधान्यको कलश बनाइन्छ । किन
२०७४ असार १४ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
कुपोषितको लागि आएको रकमबाट पोषित बन्दै कर्मचारी
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ जिल्ला समन्वय समिति, पर्साबाट सञ्चालित सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम को ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको रकम फ्रिज हुने समाचार प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमार्पmत् एक दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको बालबालिका तथा आमा किशोर–किशोरीहरूलाई कुपोषित हुनबाट जोगाउन पर्सा जिल्लाको २० गाविसमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । सोबापत चालू आवमा ८ करोड ७६ लाख रकम दिएको देखिन्छ । सुनौलो हजार दिनका कार्यक्रम संयोजक जयनारायण चौधरीका अनुसार २१ गाविसमा पहिलो किस्ताबापत २ करोड २६ लाख पठाएकोमा ३ गाविसबाहेक सबै ठाउँमा काम सम्पन्न भएको बताए । दोस्रो किस्ताबापत गएको रकमको अहिलेसम्म बिल भर्पाई नआएको र हिसाब किताब नदेखिएको चौधरीले बताए । असार मसान्त सकिन एक साता बाँकी रहँदा गएको रकम तथा तेस्रो किस्ताको रकम फ्रिज हुने निश्चित भएको चौधरीले दाबी गरे । पर्सा जिल्ला अन्तर्गत लालपर्सा, बेलवा, बसडिलवा, हरपुर, पचरुखी, बगवन्ना, मधुवन मथवल, बहुअरी पिडरी, गम्हरिया, भौराटार, बैरियाबिर्ता, अमरपट्टी, झौवागुठी, धोरे, जयमङ्गलापुर, सम्भौता, मिर्जापुर, घोडदौड पिप्रा, जानकीटोला, भिखमपुरलगायत गाविस
संसदीय कोषको पैसा खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने सम्भावना
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ आर्थिक मसान्त सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अधिकांश रकम फ्रिज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचित सांसदको संसदीय क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख गरी रु ७ करोड ५० लाखमध्ये अहिलेसम्म २० वटा योजनाको काम फछ्र्योट भएको जिल्ला समन्वय समिति, पर्साले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सो रकमबापत बढीमा २० वटा योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्र २ बाहेक १, ३, ४ र ५ मा १६ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएको र फछ्र्योट भएको समन्वय समितिले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा सम्पूर्ण कार्य टेन्डरमार्पmत् भएकोले त्यसको तथ्याङ्क अहिलेसम्म जिससमा नआएको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा रहेका १७ जना निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरूले ५० लाखको दरले ८ करोड ५० रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घटीमा रु १ लाख तथा एउटा योजना १० लाखको गरी २० वटा यो
वडामा अधिकार प्रत्योजन भएपछि वीरगंज महानगरपालिकाको राजस्व प्रभावित
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि वीरगंज महानगरपालिकाको आन्तरिक बजेट प्रभावित भएको छ। आव २०७३/०७४ को अन्तिमतिर आएर वार्षिक आन्तरिक बजेट प्रभावित भएको राजस्व शाखाले जनाएको छ । वडाहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गरिएपछि महानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या घटेको र सोसँगै आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित भएको राजस्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णले बताए । उनले एकीकृत सम्पत्ति कर, नक्सा पास, घरजग्गा कर, चारकिला प्रमाणित, व्यवसाय करलगायत करहरू महानगरपालिकाले असुल उपर गर्दै आएकोमा कर नतिरेकाहरूलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिंदै आएको कारण कर तिर्ने काममा विगतमा जागरुकता देखिए पनि अहिले आएर वडापालिकामा परिणत भएर महानगरपालिकामा केन्द्रित अधिकारहरू वडापालिकामा विकेन्द्रित भएपछि राजस्व पनि प्रभावित भएको हो । वडापालिकाले गर्ने सिफारिसहरू राजस्व तिरे, नतिरेबारे खासै खोजिनीति नगरिदिंदा कर तिर्ने मनोवृत्तिमा कमी आएको राजस्व प्रमुख कर्णले बताए । उनले चालू आवको जेठ महिनामा २ करोडको हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा १ करोड मात्र सङ्कलन हुन सकेको बताए । उनले यही अव